पर्यटकीय नगरी पोखरामा भूमाफिया सल्बलाउँदै | abc.com.np
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति बिष्णुप्रसाद बाँस्तोलामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा छानविन गरिरहेको छ । उनीमाथि पोखरा बसपार्क, पर्यटक बसपार्क, सुकुम्बासी बस्ती लगायतका विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । तिनै बाँस्तोलाले अहिले पोखरामा भवन निर्माण आचारसंहिता विपरित विशाल महल निर्माण गरेको उजुरी पोखरा उपमहानगरपालिका परेको छ । आर्थिक चलखेल गरी मापदण्ड थपघट गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने काममा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोत बताउँछ । भेट्रान लेखक तथा पर्यटन ब्यवसायी कर्ण शाक्यले समेत सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भवन निर्माण आचारसंहिता विपरित महल निर्माण गरेका छन् । उनले ‘सोच’ नामक पुस्तक समेत लेखेका छन् । सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भवन आचारसहिंता बिपरित महल निर्माण गर्ने शाक्यको अब यो हर्कतबाट कस्तो सोच रहेछ ? भन्ने समेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैगरी कानून बिपरित भवन निर्माण गर्ने अर्का ब्यक्ति ब्यापारी अशोक पालिखे हुन् । उनले निर्माण गरेको कुमुन्दिनी होम्सको भवन ६ तला रहेको छ । पालिखे नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । ज्ञानबहादुर कोइराला एकीकृत नेकपा माओवादी कार्यकर्ता हुन् । पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणसँगै पोखरा वाग्लुङ हाईवेमा उनले पनि मापदण्ड विपरित घर निर्माण गरेका छन् । बिष्णुहरि बराल नेपाली काँग्रेस पोखरा नगर अध्यक्ष हुन् । पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमण गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने भू–माफियाका रुपमा बराललाई पोखराबासीले चिन्ने गरेका छन् । यि त भए नाम चलेका भूमाफिया र तिनले गरेका कामका बेलीबिस्तार । यसका अतिरिक्त अनगिन्ति ब्यक्तिहरुले भवन निर्माण आचारसहिंता बिपरित विशाल महल बनाईरहेका छन् ।
के छ भवन निर्माण मापदण्डमा: २०३१ सालमा पोखरा शहरमा भवन निर्माण आचारसंहिता मापदण्ड तोकिएको थियो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले उपत्यका नगरविकास समिति स्तरीय वैठकको निर्णय अनुसार पोखराको सुन्दरतालाई ख्याल गर्दै क्षेत्रगत उचाई मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । जसमा वडा नं ६ वैदाम क्षेत्रमा २४ फिट उचाई, वडा नम्वर १७ मा २५ फिट उचाई वा दुई तला मात्र वनाउन पाउने नियम तोकिएको छ । त्यसैगरी, वाँकी पोखराका तत्कालीन १६ वटा वडाको मापदण्ड ३५ फिट अर्थात् तीन तला मात्र हुनु पर्ने नियम छ । हाल उपमहानगरमा यो वर्ष थप भएका १० वटा वडाको नियम भने अव वनाउने तयारीमा नगरपालिका जुटेको छ । नगरपालिकामा अहिले उही २०३१ सालमा वनाईएको मापदण्ड अनुसार मात्र नक्सा पास हुने गरेको छ । आजभोली पर्यटकीय नगरी पोखरामा ९ तला भन्दा माथिसम्म भवन बनाउने होडबाजी चलेको छ । न्यूरोडमा रहेको विष्णु वास्तोलाको घरको मापदण्ड ३५ फिट हुनु पर्नेमा ७ तला रहेको छ । जुन मापदण्डको दोव्वर भन्दा वढी छ । नगरपालिकाको आफ्नो निश्चित अडान नहुँदा रातारात पैसाको खेलमा सुन्दर शहर पोखरालाई कुरुप बनाउने अभियान सञ्चालन खुलेआम सञ्चालन भएको छ । तर, कानूनी कारवाही गर्ने अनुमति पाएका सरकारका सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेका छन् । पोखराको सुन्दरता, ताल, हिमाल र पोखरा विमानस्थललाई लक्षित गर्दै सो मापदण्ड तोकिएको पाईन्छ । तर, रातारात पैसाको प्रभावमा पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयका केही भ्रष्ट प्राविधिकहरुले नै मापदण्ड विपरितका घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । मापदण्डमा कडाई नगर्नु नगरपालिकाको दोष भएको पूर्व वोर्ड संयन्त्र सदस्य विष्णुहरि वराल लाज पचाएर बताउँछन् । जबकी उनले नै जथाभावि भवन निर्माण गरिरहेका छन् । यता नगरपालिका कार्यालय भने भवन आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा तिनै नियम मिच्नेलाई नयाँ आचारसंहिता वनाएर कर असुली गर्ने दाउमा जुटेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु र कर्मचारीतन्त्रमा घुस्याहा प्रवृति वढ्नुले पोखरा शहरको मुहार अव्यवस्थित तथा कुरुप हुन थालेको जनगुनासो बढेको छ । नगरपालिकाका सिनियर इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेका अनुसार यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्वयम् नगरपालिका नै चुकेको वताए । उनले हाकिमहरुको सही अडान नहुँदा यो समस्या आएको उल्लेख गरे । पोखरा उपमहानगरपालिकामा भर्खरै सरुवा भएर आएका कार्यकारी अधिकृत उदय बहादुर रानाले भने बनिसकेका घरहरु मापदण्ड बिपरित रहेतापनि पनि तत्काल भत्काईहाल्न नसकिने लाचरी प्रकट गरे । ‘बनिसकेका घरहरु भत्काउने कुरा हुँदैन’ उनले भने–‘मापदण्ड पुर्नबिचारका लागि क्षेत्रीय प्रशासनको समन्वयमा सरकारसँग पहल गर्नेछौ ।’ पोखरा उपमहानगरपालिका सहरी विकास तथा सार्बजनिक निर्माण विभागका प्रमुख काफ्ले भने ३५ फिट भन्दा अग्ला घर बनाउनेको अहिलेसम्म कुनै पनि नक्सा पास नगरिएको बताए । पोखराको भू–बनोटका कारण पनि अग्गा घर तथा भवन निर्माण हुँदा पोखरा उपत्यका नै भासिने खतरा समेत बढेको छ ।
मापदण्ड मिच्ने को को हुन भू–माफिया ?
अशोक पालिखे: पालिखे पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनले निर्माण गरेको कुमुन्दिनी होम्स ६ तलाको रहेको छ । व्लकको जोडाईमा वनाएको सो विद्यालय भवन पोखराको गैहापाटनमा रहेको छ ।
विष्णुप्रसाद वास्तोला: वास्तोला नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति तथा पोखरा उपत्याका नगरविकास समितिका अध्यक्ष समेत हुन् । यस भन्दाअघि समितिको २ पटक अध्यक्ष समेत उनी भएका थिए । उनले पोखराको न्यूरोडमा मापदण्ड विपरितको घर वनाएका छन् ।
कर्ण शाक्य: शाक्य लेखक साथसाथै पर्यटन व्यवसायी पनि हुन् । फेवाताल किनारा खपौंदीमा उनले पनि मापदण्ड विपरितको आलिसान महल ठड्याएका छन् ।
ज्ञानवहादुर कोईराला: कोइराला एकीकृत नेकपा माओवादी कार्यकर्ता हुन् । पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणसंगै पोखरा वाग्लुङ हाईवेमा उनले मापदण्ड विपरित घर निर्माण गरेका छन् । यसअघि उनी पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयका राजनीतिक दलको वोर्ड संयन्त्र सदस्य थिए । त्यही बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको केन्द्रको धम्की देखाउँदै करोडौं नगरकोष खर्चेर उनले स्थानीय फिर्केखोला अतिक्रमण गरेका छन् ।
विष्णुहरि वराल: बराल नेपाली काँग्रेस पोखरा नगर अध्यक्ष हुन् । पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर जग्गा प्लटिङ गर्ने भू–माफियाका रुपमा बराललाई पोखराबासीले चिन्ने गरेका छन् ।
दशरथ सुनार: सुनार पूर्व ट्याक्टर चालक हुन् । हाल उनले रुपाकोट सुनचाँदी पसल महेन्द्र पुलका सञ्चालन गरिरहेका छन् । पोखराको सिद्यार्थचोकमा उनले पनि मापदण्ड विपरित विशाल रुपाकोट कम्ल्पेक्स निर्माण गरेका छन् । मापदण्ड बिपरित भवन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने यि भूमाफियालाई बचाउन नगरपालिकाका यसअघिका पूर्व कार्यकारीहरु झलकराम अधिकारी दिवाकर वास्तोला, सुदर्शन ढकाल खुलेर लागेका थिए । यि भूमाफियासँग उनीहरुले करोडौं लाभ पनि लिएको स्रोत बताउँछ । शहरी बिकास मन्त्रालयको संयोजनमा पोखराको बिषयमा केन्द्रित भई दश वटा मन्त्रालयका सचिबहरुको संयुक्त बैठक बसेर फेवाताल, बेगनास, रुपा लगायतका बिषयमा यसअघि गम्भीर छलफल भएको थियो । फेवातालको अतिक्रमण गरी बिना ईजाजत निर्माण गरिएका संरचनाप्रति सचिबहरुको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको थियो । साथै नगरभित्र मापदण्ड बिपरित बनेका र बिना अनुमति बनेका घर, संरचनाहरु समेत भत्काउने निर्णय भएको थियो ।